Wasaaradda,Xiriirka iyo maamulka Gobolka Banaadir intaba wey ku lug leeyihiin tartanka Dawlad Gobolleedyada ee la filayo in maanta Fiinaalhihiisa lagu kala boxo! Hadaba yaa iska leh masuuliyadda bixinta abaalmarinada, muxuuse heli doonaa Dawlad Gobolleedka qaada koobka? – Gool FM
Wasaaradda,Xiriirka iyo maamulka Gobolka Banaadir intaba wey ku lug leeyihiin tartanka Dawlad Gobolleedyada ee la filayo in maanta Fiinaalhihiisa lagu kala boxo! Hadaba yaa iska leh masuuliyadda bixinta abaalmarinada, muxuuse heli doonaa Dawlad Gobolleedka qaada koobka?
Kaafi July 26, 2016
(Muqdisho) 26 Luulyo 2016. Waxaa maanta la soo gaba gabeyn doonaa sida qorshaha yahay tartanka maamul Gobolleedyada Dalka oo muddo laba toddobaad gaaraya ka socday Muqdisho.
Hadana waxa ay su’aal ka taagan tahay dhinaca abaalmarinada cidda bixineysa iyo xulkii qaada waxa uu heli karo.
Waxaa warbixintaas soo diyaariyey Wariyeheenna Maxamed Bishaar Barre Jaamac oo ka wada tirsan Gool FM iyo Goobjoog.
WARBIXIN: Carlos Tevez oo xaqiijiyey in kooxda Chelsea ay isku dayayso saxiixiisa… (Miyuu ku biirayaa Blues?)
"Mahrez waxaa u fiican inuu iska sii joogo Leicester City" - Claudio Ranieri